Lorcaserin (Belviq) အမှုန့် (616202-92-7) hplc≥98% | AASraw ဆီဆုံးရှုံးမှု
/ ထုတ်ကုန်များ / အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့် / Lorcaserin (Belviq) အမှုန့်
rating: SKU: 616202-92-7. အမျိုးအစား: အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့်
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Lorcaserin ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (Belviq) အမှုန့် (616202-92-7) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
တစ်ဦးအကျိုးရှိစွာနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်နေတဲ့စိတ်ညစ်စရာတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ အတိတ်ကာလကြိုးစားခြင်းထိုကဲ့သို့သောနှလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအဖြစ်အများအပြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအတူပါလာကြပါပြီ။ ကံကောင်းတာကတစ်လေ့လာမှုအသစ် lorcaserin ကိုယ်အလေးချိန်ဆေးလုံးသင်သည်သင်၏နှလုံးရဲ့ကျန်းမာရေးယဇျပူဇျောစရာမလိုဘဲပိုလျှံအလေးချိန်ကိုချွတ်သှနျးကူညီနိုင်သည်ကိုကပြောပါတယ်။ Lorcaserin 2012 အတွက် FDA ကအတည်ပြုခဲ့သောအံ့ဘွယ်သောအစာစားချင်စိတ်ကိုဖိနှိပ်ဆေးလုံးဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် lorcaserin ကဘာလဲ? ကောင်းပြီအောက်တွင်၎င်း၏ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ဂုဏ်သတ္တိများ, မူးယစ်ဆေးတစ်ခု In-depth ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်အသုံးပြုသောက်သုံးသော, ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများနှင့်အများကြီးပို။
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: Lorcaserin / BELVIQ (lorcaserin Hydrochloride)
Lorcaserin (Belviq) အမှုန့်ကိုဗီဒီယို
I.Lorcaserin (Belviq) အမှုန့် အခြေခံဇာတ်ကောင်:
အမည်: Lorcaserin (Belviq) အမှုန့်
အောက်တွင် 3-D ကိုညီ lorcaserin များ၏ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။
Lorcaserin ၏ဓာတု Properties ကို (belviq) (CAS 616202-92-7)
အောက်တွင် Lorcaserin (belviq) ၏အကျဉ်းချုပ်ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများဖြစ်၏ သူတို့တစ်တွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်တစ်ချက်များအတွက်အောက်က table ထဲမှာပေးအပ်ခဲ့ကြသည်။
သတ်မှတ် Atom Stereocenter အရေအတွက် 1
မိုးသည်းထန်စွာ Atom အရေအတွက် 13
XLogP3-AA ကို 2.7
အတိအကျ Mass 195.081 g / mol
Topological အရောင်အသွေးစုံ Surface ကဧရိယာ 12 တစ် ^ 2
Rotate ဘွန်းအရေအတွက် 0
မော်လီကျူးအလေးချိန် 195.69 g / mol
အဆိုပါ Lorcaserin HCL အမှုန့်တစ်ရိုးရှင်းသောဖော်ပြချက်
Lorcaserin (Belviq) Arena ဆေးဝါးအားဖြင့်ဖော်စပ်ထားတဲ့အစာစားချင်စိတ်ဖိနှိပ်ဆေးလုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ serotonin အဲဒီ receptor agonists အဖြစ်ရည်ညွှန်းမူးယစ်ဆေးဝါးများတစ်လူတန်းစားကပိုင်ဆိုင်သည်။ ဒါဟာသင်လျော့နည်းအစားအစာကိုစားခဲ့ကြပြီးနောက်သငျသညျအပြည့်အဝခံစားရကူညီဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါတယ်။ ဒါဟာ 5-HT ကိုသက်ဝင်ခြင်းဖြင့်အစာစားချင်စိတ်ဖိနှိပ်2C အစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်သောဦးနှောက် (hypothalamus) ၏ဒေသတွင်း၌ receptors serotonin အမျိုးအစားများဖြစ်သော receptors ။ သူတို့အပြည့်အဝခံစားရရန်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အချက်ပြလာတဲ့အခါသင်ရေရှည်မှာအလေးချိန်ဆုံးရှုံးတက်အဆုံးသတ်အရှင်, ဒီထက်ကိုစားရ။
အဘယ်သူ၏ဓါတုဗေဒအမည်ကား (R) -8-chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3- benzazepine Hydrochloride hemihydrate Belviq, နှုတ်ယူခံရဖို့ရည်ရွယ်ပါသည်။ ၎င်း၏မော်လီကျူးအလေးချိန် 241.16 g / mol ဖြစ်ပါသည်, နှင့်၎င်း၏ပင်ကိုယ်မူလပုံသေနည်းကို C ဖြစ်ပါသည်11H15Cl2N ကို• 0.5H2O. ၎င်း၏တည်ဆောက်ပုံပုံသေနည်း hereunder ဖြစ်ပါသည်:
ရေထဲမှာ Lorcaserin Hydrochloride hemihydrate ၏နိုင်မှု 400 မီလီဂရမ် / mL ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ တစ်ဦးက Belviq တက်ဘလက် 10.4 မီလီဂရမ် anhydrous lorcaserin Hydrochloride ညီမျှဖြစ်သောပုံဆောင်ခဲ lorcaserin Hydrochloride hemihydrate (Off-အဖြူရောင်အမှုန့်တစ်အဖြူ) ၏ 10.0 မီလီဂရမ်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာအစမဂ္ဂနီဆီယမ် stearate အဲန်အက်ဖ်, talc USP, FD & C ကအပြာရောင် #2 လူမီနီယမ်အိုင်တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် USP အပါအဝင်အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများ, ပါဝင်သည်, polyethylene glycol အဲန်အက်ဖ်, polyvinyl အရက်သေစာ USP, colloid ဆီလီကွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်အဲန်အက်ဖ်, ဆိုဒီယမ်အဲန်အက်ဖ်, silicified microcrystalline cellulose နှင့် hydroxypropyl cellulose အဲန်အက်ဖ် croscarmellose ။
အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုရဲ့လမ်းညွှန်မှုစံ (2007) ၏အဆိုအရ, Lorcaserin လူကြီးများဆေးခန်းအဓိပ္ပါယ်ရှိသောကိုယ်အလေးချိန်အောင်မြင်ရန်ကူညီနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဒါကကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေးတိုးချဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အနိမ့်ကယ်လိုရီအစားအစာနှင့်အတူတွဲသည့်အခါကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ရန်ဟုဆိုသည်။ ဒါဟာသိသိသာသာ (အနည်းဆုံး 27 ကီလိုဂရမ် / မီတာအထူးသဖြင့်အဝလွန်နေသူလူတို့နှင့်အတူ, နာတာရှည်အလေးချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူကူညီပေးနိုင်ပါသည်2), သို့မဟုတ် least30 ကီလိုဂရမ် / မီတာမှာအဝလွန် (BMI2) ။ ဤသည်ဆေးလည်းထိုကဲ့သို့သောအမျိုးအစား2ဆီးချို, dyslipidemia, ဒါမှမဟုတ်သွေးတိုးရောဂါအဖြစ်တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအလေးချိန်-related ကိစ္စများနှင့်အတူသူတွေကိုကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
Lorcaserin တစ် 5-HT အဖြစ်ရွေးချယ်ပြုမူတဲ့ဝတ္ထုစာစားချင်စိတ်ကိုဖိနှိပ်ဆေးလုံးဖြစ်ပါသည်2C 5-HT ဘို့ဆယ်ငါးဆပိုဆှဖှေဲ့၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကို select အတူ hypothalamus အတွက်အဲဒီ receptor agonist2C 5-HT သည်ထက် receptors2A 100-HT အဘို့နှင့်တစ်ဦးဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါတဲ့5ကြိမ်ပိုမိုမြင့်မားအလုပ်လုပ်တဲ့ selection2C အဆိုပါ 5-HT သည်ထက် receptors2B.
5-HT2C receptors လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာနီးပါးသီးသန့်တည်ရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် thalamus, hypothalamus, cortex, hippocampus, choroid plexus, cerebellum နှင့် amygdala တှငျတှေ့နိုငျပါသညျ။ အဆိုပါ hypothalamus အတွက် 5-HT2C receptors ၏ဆွ POMC (proopiomelanocortin) ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထို့ကြောင့်မွတ်မပြေနိုင်သောမှတဆင့်အလေးချိန်လျှော့ချရေးမြှင့်တင်ရန်မြှင့်လုပ်ဆောင်။ ဤဆင်ခြေသက်သေပြချက်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေနဲ့အခြားသုတေသနလေ့လာမှုများကထောက်ခံသည်။ ဒါကြောင့်ပုံမှန်အား 5-HT2C receptors အစာစားချင်စိတ်, endocrine လျှို့ဝှက်ချက်နှင့်စိတ်ဓါတ်များကိုထိန်းညှိကူညီထင်နေသည်နေစဉ်, အစာစားချင်စိတ်စည်းမျဉ်းအတွက်လုပ်ဆောင်ချက်အတိအကျ mode ကိုမသိရသည်။
Lorcaserin HCL မှုန့်ကိုသုံးပါ
ကျနော်တို့စစ်မှန်တဲ့ Lorcaserin ထွက်ရှိသုံးသပ်ပြီးစဉ်းစားပါလျှင်, ဒီဖြစ်ကောင်းစျေးကွက်အပေါ်အကောင်းဆုံးကိုယ်အလေးချိန်ဆေးလုံးယနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သောအဝလွန်လူများ, ဆိုလိုသည်မှာအလေးချိန်-related ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများရှိသည်သို့မဟုတ်အဝလွန်နေသောသူတို့ကိုဒီထုတ်ကုန်ကနေသိသိသာသာအကြိုးပွုနိုငျသောသူတို့အား။
ဆရာဝန်တစ်ဦး-approved ယလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်မှာ low-ကယ်လိုရီအစားအစာအစီအစဉ်နှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြောင်းလဲမှုနှင့် တွဲဖက်. သုံးတဲ့အခါ Lorcaserin တဦးတည်းပဲကိုယ်အလေးချိန်ထက်အများကြီးပိုမိုလုပ်ဆောင်ကူညီနိုင်သည် - ကအပါအဝင်, အဝလွန်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအများအပြားကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များကိုလျှော့ချကူညီပေးနိုင်ပါသည် မြင့်မားတဲ့သွေးဖိအား, ဆီးချို, နှလုံးရောဂါ, စောစောသေခံခြင်း။
ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုဌာနရဲ့အဆိုအရစုစုပေါင်းခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏ရာခိုင်နှုန်းကို5့ 10 ဆုံးရှုံးထိုကဲ့သို့သောသွေးသကြားဓာတ်, သွေးလက်စထရောနှင့်သွေးဖိအားအတွက်တိုးတက်မှုအဖြစ်အချို့သောကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုတင်ပြနိုင်ပါတယ်။
Lorcaserin HCL အမှုန့်များ၏သောက်သုံးသော
အရွယ်ရောက်တစ်နေ့လျှင်နှစ်ခုဆေးပြားယူထင်နေကြသည်။ သို့ဖြစ်. တစ်လလျှင် 60 ဆေးပြားယူဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ FDA ကအဆိုအရ, တဦးတည်းကျန်းမာအလေးချိန်ရေရှည်တည်တံ့ဖို့သူ / သူမ၏အသက်တာ၏ကြွင်းသောအရာစဉ်အတွင်းမူးယစ်ဆေးအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
ဒါဟာအပြုသဘောရလာဒ်များ 12 ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်မြင်စေသင့်ကြောင်းသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါတယ်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်အားဖြင့်သင့်အခြေခံခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်အနည်းဆုံး5ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြမည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, သင်ဆေးလုံးကို အသုံးပြု. ကိုရပ်တန့်ရန်အကြံပြုပါသည်။ တောင်မှဆက်လက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်အတူသင်ဆေးခန်းအဓိပ္ပါယ်ရှိသောကိုယ်အလေးချိန်အောင်မြင်ရန်နှင့်ရေရှည်တည်တံ့ပါလိမ့်မယ်သည်ဟုလျော့နည်းဖွယ်ရှိပါတယ်။
Lorcaserin HCL ကွိုတငျကာကှယျမှုမြား
သငျသညျ lorcaserin ယူမီ, သင့်ရဲ့ဆေးဝါးသို့မဟုတ်ဆရာဝန်သင်မူးယစ်ဆေးမှမတည့်နေသလားဆိုတာကိုသိကြကုန်အံ့, သို့မဟုတ်သင်အခြားမည်သည့်ဓာတ်မတည်ရှိမရှိ။ Lorcaserin မတည့်တုံ့ပြန်မှုသို့မဟုတ်အခြားကိစ္စများဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်မလှုပျမရှားပါဝင်ပစ္စည်းများဆံ့။ သင်ပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပေးရန်သင့်ဆေးဝါးကိုမေးပါ။
မီ (နှလုံးပိတ်ပင်တားဆီးမှု, နှလုံးအဆို့ရှင်ရောဂါ, နှေးကွေးနေနှလုံးခုန်, နှလုံးပျက်ကွက်အပါအဝင်) ကျောက်ကပ်ပြဿနာများ, ဆီးချို, အသည်းပြဿနာ, နှလုံးရောဂါအန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေရသောပြဿနာများအထူးသဖြင့်, သင်တို့၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်းနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့ဆေးဝါးသို့မဟုတ်ဆရာဝန်အကြောင်းကြား, ဒီမူးယစ်ဆေးကိုယူ (သည်ပုံပျက်နေသောလိင်တံ, Peyronie ရဲ့ရောဂါ, မျိုးစုံ myeloma, တံစဉ်ကိုဆဲလ်သွေးအားနည်းရောဂါ, သွေးကင်ဆာအပါအဝင်) အမျိုးသားများတွင်နာကျင် / အချိန်ကြာမြင့်စွာစိုက်ထူ။
ဒီအစာစားချင်စိတ်ကိုဖိနှိပ်ဆေးလုံးသင်သည်သင်၏စဉ်းစားတွေးခေါ်သို့မဟုတ်ခေါင်းမူးနှေးကွေးစေနိုင်ပါတယ်။ ဆေးခြောက်သို့မဟုတ်အရက်သည်ဤဆိုးကျိုးများပိုမိုဆိုးရွားစေလိမ့်မည်။ စက်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုဖို့မောင်း, သို့မဟုတ်သင်ဂရုတစိုက်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်သည်အထိရွှင်လန်းတောင်းဆိုနေပြီဖြစ်သောဘာမှလုပ်မနေပါနဲ့။ ယမကာကန့်သတ်ခြင်းနှင့်သင်ကဆေးခြောက်အသုံးပြုနေသည်ဆိုပါကသင်၏ဆရာဝန်ပြောဆိုပါ။
သင်တစ်ဦးခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူဖို့ပါပဲလျှင်, သင်တို့ကို (nonprescription မူးယစ်ဆေးဝါး, ဆေးဖက်ဝင်အပင်များထုတ်ကုန်များနှင့်ဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးဝါးများအပါအဝင်) သင်ယူရှိသမျှကိုထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်. သင်၏အသွားဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆရာဝန်ကိုပြောပြကြောင်းသမ္မာသတိရှိသောဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူနေထိုင်နေနေလျှင်ဤကိုယ်အလေးချိန်ဆေးလုံးသင့်သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။ သငျသညျအကြံပေးအဖြစ်ပုံမှန်ကြားကာလမှာသင့်သွေးတွင်းသကြားဓာတ်အဆင့်ကိုစစျဆေးနှင့်ဆရာဝန်နှင့်သင်၏ရလဒ်များကိုမျှဝေပေးသေချာအောင်လုပ်ပါ။ သငျသညျအနိမ့်သွေးသကြားဓာတ်ရောဂါလက္ခဏာတွေရှိသည်ဆိုပါကသင်၏ဆရာဝန်ကိုအသိပေးပါ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကသင်၏လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်အစားအစာသို့မဟုတ်ဆီးချိုရောဂါဆေးကိုထိန်းညှိဖို့လိုအပ်လိမ့်မည်။
ကမမွေးသေးသောကလေးထိခိုက်စေမည်အကြောင်းကြောင့်ဤမူးယစ်ဆေးကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုမပြုရပါ။ ကလေးမွေးဖွားထိန်းချုပ်မှု၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောပုံစံများ၏လျှောက်လွှာနှင့် ပတ်သက်. သင်၏ဆရာဝန်ကိုမေးပါ။ သငျသညျကိုယျဝနျဆောငျသို့မဟုတ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်လာလျှင်, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ချက်ချင်းသင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြောပြပါ။
ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိဒီမူးယစ်ဆေးနို့သို့ဖြတ်သန်းရှိမရှိမသိနိုင်ပါဘူး။ တစ်ဦးမွေးကင်းစမှအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့, နို့တိုက်ကဒီဆေးကိုသုံးပြီးတဲ့အခါမှာအကြံပြုသည်မဟုတ်။ သငျသညျနို့တိုက်ကျွေးမပြုမီသင်သည်သင်၏ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ကြောင်းကိုသေချာစေပါ။
သင့်ဆရာဝန်ထံမှမရရှိနိုင်လျှင်သင် lorcaserin နှင့်သင်တစ်ဦး ပြန်. ဖြည့်ရမည်သည့်အချိန်စတင်သုံးစွဲခြင်းမပြုမီအသုံးပြုသူသတင်းအချက်အလက်လက်ကမ်းစာစောင်များဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ။ အမှု၌သင်တို့ကိုမည်သည့်မေးခွန်းရှိသည်, သင့်ရဲ့ဆေးဝါးသို့မဟုတ်ဆရာဝန်ကိုမေးပါ။
သင့်ရဲ့ဆေးဝါးဒါရိုက်တာအဖြစ်တစ်မုန့်ညက်နှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲနှုတ်ဖြင့်တစ်နေ့လျှင်ပုံမှန်အားဖြင့်နှစ်ခုအဆဒီစာစားချင်စိတ်ကိုဖိနှိပ်ဆေးလုံးကိုယူပါ။ ကထဲကအများစုကိုရရှိရန်မှန်မှန်ကဒီမူးယစ်ဆေးကိုသုံးပါ။ မှတ်မိဖို့သငျသညျအထောက်အကူပြုစေရန်, နေ့တိုင်းတူညီတဲ့ကြိမ်မှာဆေးလုံးယူပါ။
Lorcaserin တစ်အလေ့အထ-ဖွဲ့စည်းမူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးထိုးတိုးမြှင့်သို့မဟုတ်ထို့ထက် ပို. မကြာခဏသတ်မှတ်ထက်ကဒီဆေးလုံးကိုယူမထားပါနဲ့။ သငျသညျရှိသညျအခြေအနေကိုမဆိုမြန်ဆန်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်မပေးစေခြင်းငှါ, ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏အန္တရာယ်တိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။
အထူးသဖြင့်မူးယစ်ဆေး lorcaserin ဆေးလုံးနဲ့တွဲသုံးကြသောအခါပြင်းထန်မူးယစ်ဆေး interaction ကရာအရပျယူနိုငျသညျ။ သငျသညျကိုစတင်သို့မဟုတ်သုံးပြီးရပ်တန့်အားလုံးသင်လက်ရှိအသုံးပြုနိုင်သည်သောမူးယစ်ဆေးများနှင့်အခြားမည်သည့်ဆေးညွှန်းနှင့် ပတ်သက်. သင်၏ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ။
Lorcaserin ကိုယ်အလေးချိန်ဆေးလုံး 18 နှစ်ရှိပြီထက်ငယ်ရွယ်သောပုဂ္ဂိုလ်များအသုံးပြုရန်အတည်ပြုမပေးပါ။
အဘယ်သို့ငါ Lorcaserin HCL အမှုန့်ကိုယူသင့်သနည်း
, ဝါးကိုချိုးဖျက်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုတိုးချဲ့-လွှတ်ပေးရန်တက်ဘလက်နှိပ်စက်မထားပါနဲ့။ ရုံကတပြင်လုံးကိုမျိုချ။
Lorcaserin စာစားချင်စိတ်ကိုဖိနှိပ်ကိုလည်းလေ့ကျင့်ခန်း, အလေးချိန်ကိုထိန်းချုပ်, အစားအစာနှင့်အစဉ်အမြဲသင့်သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကိုစမ်းသပ်ပါဝင်သည်သင့်သောတစ်ဦးပြည့်စုံကုသမှုအစီအစဉ်ရုံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်တင်းကြပ်စွာသင့်ရဲ့ဆေးဝါး, အာဟာရနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုလိုက်နာပါ။
လူအပေါင်းတို့သည်ပုလင်းထဲကနေအသုံးပြုသောဆေးပမာဏ၏စံချိန်ထားပါ။ Lorcaserin ကိုယ်အလေးချိန်ဆေးလုံးအလွဲသုံးစားမှုတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးဖြစ်ပြီး, တစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးဆေးညွှန်းမပါဘဲသို့မဟုတ်လျြောသင့်ရဲ့ဆေးဝါးကိုအသုံးပြုနေသည်ဆိုပါကသင်အမြဲသတိထားရပါမည်။
အခြားမည်သူမဆိုအတူ lorcaserin ဆေးဝါး share ဘယ်တော့မှမ။ အခြားအဘယ်သူမျှမကရနိုင်တဲ့အရပျ၌မူးယစ်ဆေးထားပါ။
အဘယ်အရာကိုသင်တစ်ဦး Lorcaserin ထိုးလက်လွတ်အမှု၌ဖွစျသှားသလဲ
ရိုးရှင်းစွာအသင်မှတ်မိချက်ချင်းလွဲချော်ထိုးယူပါ။ လာမယ့်အချိန်ကာလသတ်မှတ်ထိုးဘို့အချိန်ကိုလုနီးပါးလျှင်သင်ကလွဲချော်ထိုး skip သငျ့သညျ။ တစ်ဦးလွဲချော်ထိုးတက်သည်ဖြစ်စေတစ်ဦးအပိုဆောင်းထိုးမယူပါနှင့်။
အရေးပေါ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီများကိုရှာဖွေသို့မဟုတ် 1-800-222-1222 မှာအဆိပ်အကူအညီလိုင်းဆက်သွယ်ပါ။
ငါ lorcaserin အပေါ်နေချိန်မှာယူပြီးအဘယ်အရာကိုရှောင်ရှားသင့်သလဲ
သင့်ဆရာဝန်၏အကြံပေးချက်မပါဘဲ over-the-counter ဦးသို့မဟုတ်ဆေးညွှန်းအလေးချိန်-အရှုံးထုတ်ကုန်မဆိုအခြားယူမထားပါနဲ့။ lorcaserin ဆေးလုံးကိုယူပြီးသည့်အခါလည်း, အအေးသို့မဟုတ်ချောင်းဆိုးဆေးယူကြဘူး။
တခြားဘာဆေး lorcaserin ထိခိုက်စေနိုငျသလဲ
အောက်ပါမူးယစ်ဆေးဝါးများ lorcaserin ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်တယ်:
ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခေါင်းကိုက်ခြင်းဆေးဝါးများ-ထိုကဲ့သို့သော Maxalt, Zomig almotriptan, rizatriptan, sumatriptan, frovatriptan, zolmitriptan, Imitrex နှင့်အခြားသူများကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ရာတစ်ဦးက "triptan" ။
erectile dysfunctiondrugs- Levitra, Viagra avanafil, Cialis, sildenafil, tadalafil နှင့်အခြားသူများ;
(စ L-tryptophan အဖြစ်လူသိများ) tryptophan;
ချောင်းဆိုးသို့မဟုတ်အအေးမူးယစ်ဆေးဝါးများ Dextromethorphan ပါရှိသည်ရာ; သို့မဟုတ်
အထက်ပါစာရင်းအပြည့်အစုံမဟုတ်ပါ။ အခွားသောဆေးဝါးများ lorcaserin ကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါ, အားလုံးဖြစ်နိုင်သမျှ interaction ကဒီဆေးဝါးလမ်းညွှန်ထဲမှာစာရင်းဝင်ပြီမဟုတ်။
ဘီဘီစီတွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် Lorcaserin HCL (CAS 616202-92-7) ၏စွမ်းရည်အစီရင်ခံစာများ
ထိရောက်မှုဒါပေမယ့်လည်းဆေးဝါးများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမသာရည်မှတ် Lorcaserin အပေါ်အများအပြားက BBC အစီရင်ခံစာများရှိခဲ့သည်။ ဘီဘီစီ၏အဆိုအရ, ဆေးပညာ၏နယူးအင်္ဂလန်ဂျာနယ်ရဲ့လတ်တလောလေ့လာမှု, lorcaserin စာစားချင်စိတ်ကိုဖိနှိပ်ဆေးလုံးကို အသုံးပြု. လူတွေသုံးနှစ်ခွဲသကဲ့သို့အနညျးငယျ၏စံချိန်တင်ကာလအတွင်း 8.8lb (4kg) ဝန်းကျင်ပျမ်းမျှဆုံးရှုံးခဲ့ရဖော်ပြသည်။ ဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို lorcaserin ခြောကိုအကောင်းဆုံးကိုယ်အလေးချိန်ဆေးပြားများ၏တဦးတည်းကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။
အဆိုပါအစီရင်ခံစာပါကအစာစားချင်စိတ်နှိပ်ကွပ်ခြင်းဖြင့်လည်ပတ်သောကတည်းကလည်းဆေးဝါးကပြောပါတယ်, နှလုံး conditions.The ထုတ်ဝေလေ့လာမှု၏မြင့်မားသောအန္တရာယ်မှာအသုံးပြုသူများအထားဘူး 12,000 လအတွင်းတစ်ဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါ 40 USA တွင်အဝလွန်သို့မဟုတ်အဝလွန်လူနာနောက်သို့လိုက်ကြ၏။
သုံးနှစ်ခွဲပြီးနောက် lorcaserin ယူပြီးအရွယ်ရောက်လေ့လာမှု၏ဦးဆောင်သုတေသီတဦးတည်းဒေါက်တာ Erin Bohula သည်နှင့်အညီ, တစ်ဦးရလဒ်များအရအိပ်ယာကိုလက်ခံရရှိတွေထက်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုငါးတဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလျော့ချရှိသည်ဟုဖို့မထက်သုံးကြိမ်ထက်ပိုနိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏။
စိတျနှလုံးအဆို့ရှင်အပေါ်ကောက်ယူစမ်းသပ်မှုဟာရလဒ်များအရအိပ်ယာနသေူမြား၏စိတ်နှလုံးအဆို့ရှင်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်မဆိုသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုမပြခဲ့ပါဘူး။ တခြားပိန်စေဆေးပြားများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမှကြွလာသောအခါဒီမူလတန်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုစိတ်တွင်ထားရှိခြင်း, lorcaserin အလားအလာအကောင်းဆုံးကိုကိုယ်အလေးချိန်ဆေးလုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆေးဝါးယူပြီးအရွယ်ရောက်အမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါ၏အနိမ့်စွန့်စားမှာကိုလည်းခဲ့ကြသည်။ US မှာတစ်လထိုးနှုန်း£ 155-225 ပတ်လည်ဆေးလုံးကုန်ကျစရိတ် ($ 220-290) ။ Lorcaserin အခြားသူတွေအကြားအစာအိမ်တီးဝိုင်းခွဲစိတ်တူသောထိုးဖောက်အလေးချိန်-လျှော့ချရေးလုပျထုံးလုပျနညျးမှအကောင်းဆုံးအစားထိုးပေးစွမ်းသည်။
နောက်ထပ်ဘီဘီစီအစီရင်ခံစာအစာစားချင်စိတ်ပေါ်တဲ့သုတေသနကောက်ယူသောသူ Aberdeen ရဲ့ Rowett Institute ၏တက္ကသိုလ်မှသုတေသီများကလေ့လာမှု featured ။ အဆိုပါသိပ္ပံပညာရှင်များအစာစားချင်စိတ်ပေါ်၎င်းတို့၏သုတေသနဦးနှောက်ရဲ့တိကျတဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသူတို့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ကြောင်းသူကပြောပါတယ်။
သူတို့ကဆေးဝါးများနှင့်အတူသူတို့အားတိကျတဲ့ဆဲလ်တွေလွှမ်းမိုးနေဖြင့်သူတို့အစားအစာစားသုံးမှုကိုလျှော့ချပေးနိုင်ခဲ့သတိပြုမိသည်။ lorcaserin ဒီယန္တရားဖြင့်အလုပ်လုပ်ကတည်းက, ဒီလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို lorcaserin တူသောအသစ်ကဆေးဝါးများအတွက်တံခါးများဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း lorcaserin-ယင်း၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ထိရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ယုံကြည်ဘယ်အရာကိုကျွမ်းကျင်သူများအားဖြည့်မသာ။